U-Irina Bezrukova noConstantin Lavronenko basayinwe kwiArmenia, ifoto
Sekuyiminyaka nesiqingatha ukususela ekubeni enye yezona zibini ezinamandla kunye ezintle kunazo zonke zeRussia zezobugcisa zenziwa. Ngenxa yomlawuli omdala u-Anna Matison Sergei Bezrukov washiya umkakhe u-Irina, kunye naye owayehlala naye iminyaka eyi-15.
Ukufa kwonyana ophela kunye nokuqhawula umyeni wakhe othandekayo waba ngu-Irina Bezrukova inkohlakalo enkulu. Nangona kunjalo, umdlali we-actress wathola amandla angagcini nje kuphela ukuba aphile kuyo, kodwa nokuzibonela ngokwakhiwa. Ngoku u-Irina Bezrukova usebenza kwiprojekthi yakhe yethelevishini, uthatha inxaxheba kwiifoto zesikrini, eneenkwenkwezi kwiiklip, kwaye usebenza kwimisebenzi yokunceda. Ngexesha elifanayo, uyakwazi ukudlala kwindawo yokudlala kunye nokwenza iifilimu.
Ifilimu entsha "Ukuzamazama komhlaba" kunye no-Irina Bezrukova utyunjelwe "u-Oscar" waseArmenia. Ifilimu ichaza ngeziganeko ezibuhlungu zango-1988, xa ngenxa yesigxobhozo esinamandla kunazo zonke e-Armenia, abantu abayi-25 000 bafa.
Umlingani ka-Irina Bezrukova kule filimu wayengumdlali weConstantin Lavronenko, abo abaphulaphuli bakhumbula ngenye yeendima eziphambili kwinqaku "Utywala."
Abalandeli baka-Irina Bezrukova balungele ukuthumela kuye kwi-ofisi ye-registrar
Ngenye imini, u-Irina Bezrukova, kunye nabadali kunye nabanye abadlali, baya eYerevan ukuba baqalise ifilimu "Ukuzamazama komhlaba."
I-film crew kwinkomfa yenkomfa kwi-premiere yomfanekiso iphendule imibuzo yabathengi. U-Irina Bezrukova wabika zonke iindaba zakutsha kwi-Instagram yakhe. Namhlanje, u-Irina uthumele umfanekiso we-microblog wodonga olukhulu apho abantu abadumileyo beshiya iinqwenela zehlabathi. Enye kunye nomlingane wakhe kwifilimu, uKonstantin Lavronenko u-Irina Bezrukova usayinela eludongeni:
Isayinwe neConstantin)) .. Hayi-hayi, kungekho kwii-OFISI ZOBHALISELO)) 😂AA "kwindonga yehlabathi" eYerevan. Ndenenhlanhla ngegama .. # Yerevan
Kwaye nangona u-Irina wachaza ukuba abasayinayo kwiofisi ye-registry, abalandeli baxubusha ngokugqithiseleyo esi sihloko, beqaphele ukuba uKonstantin Lavronenko ngumntu omdala umdlali we-actress:
0605ia Ewe, kuya kuba ngcono kwiofisi yokubhalisa! Ndicinga ukuba kukufanele. Amehlo akhe athembekile.
vika18045 Inhle kakhulu iya kuba sisibini ...
kallibristika Wait, raspishetsya Irina) Owesifazane omhle akapheli
Umfazi kaAndrei Arshavin uxele ukuba uYulia Baranovskaya ufihla abantwana bebhola lebhola
3 Iingqungquthela: UVadim Kazachenko waqala ukuthetha ngokukhulelwa komfazi wakhe
UAndrei Gubin wenqaba ukuqaphela unyana ongekho mthethweni kwi-fan
Ukulandela u-Lena Miro u-Alena Vodonaeva uhlasele uAlice Arshavin
Imidlalo yabantwana evulekileyo ngexesha lokubanda
Izinwele kunye nokuzinakekela
Ukuhlengahlengiswa kunye neengqungquthela - eziqhelekileyo kunye nezobuhla
Iimpawu kunye nezizathu ze-sciatica
Ukuveliswa kwepion efanelekileyo
Kutheni abafana bayeke ukuzama ukufumana amantombazana?
Indlela yokubuyisela iphunga lesonka?
I-dessert ye-Curd ne-chinan